I-PBT kunye nePET Filament Factory - iChina PBT kunye nePET Filament abavelisi, abaxhasi
Umgangatho ophezulu kunye nemibala ye-PBT enemibala yebrashi yamazinyo
I-pbt brush filament inobunzima obugqwesileyo kunye nokuchasana nefuthe, kwaye ngenxa yokuxhathisa kwayo i-asidi kunye nokufuma okuncinci, kufanelekile kwiindawo ezimanzi zokusebenza. Isetyenziselwa ukuqhubekisa iibrashi zamazinyo, iibrashi zeshishini kunye nokucoca iibrashi, izikhonkwane zeenzipho, njl njl.
I-Antibacterial PBT filaments yeebhulashi zamazinyo
Ukuthamba kwe-PBTfilament kungcono kunaleyo yocingo lwenayiloni, kodwa ukuxhathisa kwayo lingonakali kangange-610. Ukusebenza kwe-PBT kuthambile, kwaye kufaneleke kakhulu ekucoceni nasekucoceni iindawo ezintle, njengokucoca umphezulu wemoto.
I-PBT kunye ne-PET Filament yokwenza ibrashi yamazinyo
isilwanyana sasekhaya kunye ne-pbt filament Iinwele zithambile kwaye zinzima, zinokushisa okuphezulu, ziyabuyisa ngokuqinileyo, ziyaguquguquka kwaye zinxibe, akukho lula ukwaphula kunye nokukhubazeka, kunye nobomi benkonzo ende